CartoDB, ndị kasị mma ike map online
CartoDB bụ otu ngwa na-adọrọ mmasị nke etolite maka ịmepụta maapụ dị mma n'ịntanetị n'oge dị mkpirikpi. Ejiri na PostGIS na PostgreSQL, dị njikere iji ya, ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mma m hụworo ... yana na ọ bụ ụzọ sitere na Hispanic, na-agbakwunye ya uru. Formats na ọ na-akwado N'ihi na ọ bụ a lekwasịrị anya development ...
Geospatial - GIS, innovations, Internet na Blogs
OkMap, ndị kasị mma ka ịmepụta na dezie GPS map. FREE
OkMap nwere ike bụrụ otu n’ime mmemme siri ike maka iwalite, dezie na ijikwa maapụ GPS. Na njirimara ya kachasị mkpa: Ọ bụ n'efu. Anyị niile ahụla otu ụbọchị mkpa iji hazie maapụ, georeference ihe oyiyi, bulite faịlụ ọdịdị ma ọ bụ kml na Garmin GPS. Ihe aga-eme dika ndia ...
Google Earth / Maps, GPS / Equipment, mbụ echiche
Nweta, ọnụahịa GPS centimita dị ọnụ ala
Emepụtara ngwa ahịa a n'oge na-adịghị anya na ESRI User Conference na Spain, naanị izu gara aga na nke a ga-esote ha na TopCart na Madrid. Ọ bụ usoro ọnọdụ GPS na mmụba nke na-akwado nhazi nhazi, nke enwere ike inweta centimita ziri ezi. Ọ dịghị ihe ndị ọzọ anaghị eme ...
Nke a bụ ọrụ na-adọrọ mmasị nke a na-emepe ugbu a na Honduras, n'okpuru usoro usoro ụgbọ ala Rapid Transit Bus (BTR). Ọ bụ ezie na ọ bụ ugbu a na ọkwa nghọta a n'ihu ndị na-ebu ndị na-enweghị nghọta doro anya banyere etu obodo si agbanwe, o yiri ka anyị bụ otu n'ime ihe dị mkpa na-arụ ọrụ na mmepe nke ahịrị a ...
innovations, Land Management
Esi tinye ihe oyiyi mpaghara na Google Earth
Na-aza ụfọdụ ajụjụ na-abịakwute m, ana m ewere ohere ịhapụ nsonaazụ ya maka ọha na eze. Oge ụfọdụ gara aga ekwuru m banyere otu ị ga-esi tinye ihe oyiyi ejikọtara na isi ala na Google Earth, ọ bụ ezie na iji adreesị weebụ. Na nke a, achọrọ m igosi ya site na iji ụzọ mpaghara: Echere na faịlụ ahụ dị n'ọnọdụ C: /Users/Usuario/Downloads/woopra_ios.png, mgbe ahụ ...